Murti iyo Miid W/Q: Cabdul Cabdukariim ( Ugaaska) | Laashin iyo Hal-abuur
Murti iyo Miid W/Q: Cabdul Cabdukariim ( Ugaaska)
Maalin maalmaha ka mid ah, ayaa gabar yar oo todobo jir ah, oo dhax joogta, beerta ay ilmuhu ku ciyaaraan. waxa ay soo qabsatay labo xabo oo TUFAAX ah, kaddib ayaa waxaa u yimid hooyadeed oo aad u faraxsan oo dhoolla cadeeyneysa, waxa ayna naxariis iyo kalgacal ku jiro u weydiisatay gabarteeda in hal xabbo oo tufaaxa ay siiso.
Gabartii yareyd isla markiiba, waxa ay dhinac ka goosatay xabbad tufaax ah. Hooyadii ayaa la yaabtey falka gabadheedu samaysay iyadoo dareen galay haddane uma muujin gabarteeda, waxay si degan u weydiisay maxaa dhacay? ayaa gabartii yareyd, haddana xabbadii kale goosatay, hooyadii ayaa la amakaagtey siday gabartu wax u wado, ileeyn lamana hadal jawaab walbana waxay ku bixisay fal u muuqanaya diidmo iyo ineysan waxba u ogoleyn, ayadoo la yaaban falka gabarteeda ay ku dhaqaaqday, balse aan u muujin wax xanaaq ah iyo sida ay uga xuntahay toona . Cabbaar markii ay sugtay aya gabartii yareyd u soo taagtay, hooyadeed mid ka mid ah, labadii tufaax ay goo goosatay, ayadoo leh hooyo kan ayaa macaan labadooda ee kan kale waa dhanaan, waxaan rabay kan macaan inaan ku siiyo maadaamada aad hooyadeey aan ifka u jeclahay tahay.
Hooyadu kama fileyn gabadheeda garashadaa fog iyo aragtida qotada dheer, ilmaa dhabanadeeda qoysay, waxayna niyada ka tiri, naftani male xumaa, haddana quus dhawaa, gabarteydu waxay ii sahminaysay wax wanaagsan anna waxaan u mooday inay i qadineyso oo ii quuri weyday, maasha la yiri: Hubsiimo halbaa la siistaa.
Haddaba aqristoow ,waligaa ha ku dagdagin inaad kaligaa go’aan iska qaadato, ugu yaraan sug inta uu qofku asaga uu jawaabta iskiis u soo bxiyo, maxaa yeelay dagdagta iyo dhaqso go’aan gaaridda, waxey sababtaa in aad xukunto xukun aan wanaagsanayn. Waxa aad indhahaaga ku aragto iyo waxa aad dhegahaaga ku maqasho xitaa markiiba go’aan haka qaadan ee waxaa keenay isku day inaad ogaato.
Ninbaa wuxuu soo galay gurigiisa markaasuu wuxuu maqlay xaaskiisa oo wiilkeedu weydiinayo hooyo adduunka yaad ugu jeceshahay markaasay tiri: ” Qof baan ugu jecelahay” Markaasuu yiri qofkaasi waa kee? Hooyadii ayaa tiri waa qof aan jeclahay, wiilkii ayaa ku celiyey ma aabbe ayaad ugu jeceshahay, markaasay ugu warcelisay maya.
Ninkii ayaa xanaaqay oo ciil bestiis noqday, wiilkii ayaa si degan u weydiiyey waayo qofkaasi markaasay tiri hooyo waa Adiga! Ninkii ayaa qosol is celin waayey, gabadhii iyo wiilkiina uga sheekeeyey inuu tuhun been ah galay balse uu farxay in qofka laga jecel yahay uu yahay wiilkiisa uu isaguba jecelyahay.
Malahaaga wanaaji, qofnaba haw tuhmin qof xun inuu yahay. haddaad aragto qof hawshiisa ku foogan oo had iyo goor dantiisa u heelan, shaqadiisa jecel, qoyskiisa jecel, haw qaadan qof baqaya ama doqoniimo ka dhigtey inuusan dan laawe noqone ee waa nin hawlkar ah oo waxaaney dani ugu jirin ka dheeraaday.
Cidna ha liidin
Wiil dhallinyaro ah ayaa had iyo gooraale markuu dugsiga ka baxo wuxuu u ordi jirey gurigooda oo magaalada ka baxsanaa, dhallinyarada kale waxay u maleyn jireen fuley ama mid ka baqanaya dadka kale oo gooni daaq ah, balse arrinkiisu sidaa waa ka duwanaa wuxuu ahaa, nin waalidkiis oo labadooduba indho la’ yihiin caawiya, marka hadduu hawshiisii waxbarasho dhammeystay wuxuu u ordi jirey daryeelka waalidkiis, maalintii dambe ayaa loo dhaba galay, waxaana la ogaaday hawsha culus oo hayo, maalintaas ayaa ardadii iyo dadkii kale ee arrinki maqlay iyaguna garab istaageen oo caawiyeen, wuxuuna ku galabsaday wanaagga uu falay in isagana wanaag loo falo.
Qof haddaad aragto gacan furan oo wax walba oo naftiisa ku wanaagsan haddana is dhaafiya ee dadka kale u hura, haw qaadan inuu dabaal iyo doqon la sirsiran karo yahay ama nin xoolo ku dheel ah waa qof jecel inuu dhibaatada dadka la qaybsado oo dareen wanaagsan.
Nin Oday ahaa oo la dhihi jirey Xaaji Maxamed ayaa dhaqan u lahaa marka habeenkii la soo hoyaado gurigiisa ee xoolaha la liso inuusan waxba cunin isaga iyo ubadkiisa ilaa laga gaaro salaadda cishe, isagoo ka baqaya intaas in marti u timaado oo hadhoow ku hungoowdo ama iyagoo dhergay marti gaajeysan u timaad oo ay hambadii ka hartey siiyaan caanaha ama markaas kaddib dheri loo dhardhaaro ama loo loogo. wuxuu bidhaamin jirey martida isagoo iska dhawraya inuu qof socota ahi ku qado gurigiisa, waa habdhaqankii wanaagsanaa ee bulshadeena.
Maantana deriskaaga oo gaajo u dhimanaya ayaa cuntada la daadiyaa, Agoon aan awoodin waxay qabsadaan oo agtaada ku gaajoonaya ayaad ubadkaagu markay dhergaan baahida ku caayaan, dad indho la’ ama laxaadla adigoo og ayaad siisaa waxaaga mid xoog weyn oo weliba xoolo haysta adiga oo ammaan iyo faan kaga doonaya.Hadyad baad u geysaa mid dheregsan adigoo la dhaafaya mid gaajeysan oo ay waxtar u tahay
Cidna ha coleysan
Aqristoow in badan waxaa dhacda inaad qof coleysato markaad aragto inuu kaa aragti duwan yahay ama qaabkaad wax u aragto si ka duwan u arko, kala aragti duwanaanta maaha ugub ee waa arrin curad ah, hadda eeg aniga iyo adiga isuma ekin, isku dhererna ma nihin , kama xanaaqeysid midaas, oo maxaad uga xanaaqaysaa inaan kala garasho duwanaano, kalana aragti duwanaano, Yaab!!
Ogoow waxaad jeceshahay macaanka, aniguna waxaan jecelahay dhanaanka, dharka waxaad jeceshahay caddaanka aniguna waxaan jecelahay madoowga, waxaad jeceshahay ammaanta, aniguna waxaan jecelahay dhaliisha, aan kuu soo gaabiyo waxaad jeceshahay ciyaaraha aniguna waxaan jecelahay daawashada filimada, maynagaaba isku mid ah, Maya ma nihin, intaas midna iguma necbid sax, haddaba haygu nicin inaan kaaga aragti duwanaado dhinacyo badan oo hannaanka nolosha ah, siyaasadda arrimaha bulshada iwm.
Hadii duul habaawsani
Duco ay sameystaan
Lagu xiro duleedkiyo
Habaar ay ku daayaan
Uurkuna daban yahay.
Danbigaa ayaa galay?
Waa dakanno mugweynoo
Indhaha laga dabooshee
Kii quraacda dayan karaa
Qaddo loogu darraya
Dadka iyo dalkeeygoow
Jirku illa dubaaxddaa.
Docda kale haddaan dayo
Caku dowlad xummadeen
Damiirkooda suu yahay
Danno gaara mooyee
Danta guud ma eegaan
Kuli dabato weeyaan
iyo Dooxatiyo bahal
Daadihiya may baran
Deji oo liq mooyee
Danyartaa u kaalme
Dugsi geeya may baran
Kala daadshe mooye
Isku duuba may baran
Waa su’aal da’weeynoo
Danbiga ayaa galay?
Yaa diidan nabaddoo?
Yaa u duuban maantoo
Loo durbaaano tumayaa?
Jirku wey damqanayaa.
Kama daallo haddaloo
Kuwa dagalka joogiyo
dibadaha dar joogaba
Aan dardaaran siiyee.
Dadku waa ka daalaye
Ka daayaanu leenahay
Dulmigiyo wixii dhacay
Ka daawooba leeyahay
Kuwa dabinka dhigayiyo
Naga daaya leeyahay.
Dal awood dhaqaaliyo
Gobonnimo ku deexdo
Qaran dayr biroo adag
Aynu dowlad gaarnee
Dadkaygoo midnimo guud
Isku duubni weligiin
Ku dedaala doorkiin
W/Q: Cabdul Cabdukariim ( Ugaaska)